Muujinta isleeg ka 86 ilaa 88 Bogga 18 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
H2O + NaCl + NH3 → NaOH + NH4Cl
biyaha chloride sodium ammonia sodium hydroxide chloride ammonium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2O + NaCl + NH3 → NaOH + NH4Cl
How reactions can happened and produce NaOH (sodium hydroxide) and NH4Cl (ammonium chloride) ?
Si tartiib ah ugu dar xalka ammonia tubada tijaabada oo ay kujirto 1 ml oo ah sodium chloride xal, xoogaa rux
Amonia waa saldhig daciif ah. Xalalka Amonia waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan biyo badan oo hydroxides ah markay la falgalaan xalka cusbada. Dareen-celintaani ma dhacdo maxaa yeelay NaOH waa hydroxide la milmi karo, ma aha mid soo degaaya.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2O + NaCl + NH3 → NaOH + NH4Cl
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Muujinta isleeg ka 86 ilaa 88 Page 18